News 18 Nepal || दशैंमा विदेशबाट घर आउँदै हुनुहुन्छ ? यी सामान ल्याउँदा लाग्दैन भन्सार
काठमाडौं । दशैंमा विदेशबाट घर फर्कँदै हुनुहुन्छ ? हुनुहुन्छ भने ल्याउने विदेशबाट ल्याउँदा कतिपय सामानमा भन्सार शुल्क तिर्नुपर्दैन । केही सामानको भन्सार शुल्कमा सीमितता तोकिएको छ । सीमितता तोकिएका सामान बढी ल्याएमा जफत हुने तथा जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
भन्सार ऐन २०६४ को दफा ९, उपदफा (३) ले २०७७ जेठ १५ गतेदेखि लागू हुने गरी यात्रुहरुले आफ्नो साथमा ल्याउन पाउने निजी प्रयोगका मालवस्तुका सम्बन्धमा देहायबमोजिमको व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि लगाउने केही जोर लुगा ल्याउँदा पनि भन्सार तिर्नुपर्दैन । र, एक थान क्यामेरा, मोबाइल, पेन ड्राइभ र घडी ल्याउँदा पनि भन्सार शुल्क तिर्नु पर्दैन । त्यस्तै १ लिटरसम्मको मदिराको बोतल ल्याउँदा पनि भन्सार शुल्क तिर्नु पर्दैन ।
तर, विदेशमा वसी फर्केका नेपाली यात्रुले ल्याउने जुनसुकै टेलिभिजनमा एकमुष्ट समदरमा मूल्यको ५५ प्रतिशतका दरले महसुल तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, एक/एक थान ट्राइसाइकल र बच्चा राख्ने पेराम्वुलेटर ल्याउँदा पनि भन्सार शुल्क तिर्नु पर्दैन ।